Xisbiga Solberg oo ka joojinaya kaalmada lacageed waalidiinta aan isticmaalin xanaanooyinka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaXisbiga Solberg oo ka joojinaya kaalmada lacageed waalidiinta aan isticmaalin xanaanooyinka
Xisbiga Solberg oo ka joojinaya kaalmada lacageed waalidiinta aan isticmaalin xanaanooyinka
May 20, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Toddobaadka dhammaadkiisii, shirkii qaran ee xisbiga muxaafidka (H) ayaa ka horyimid Erna Solberg. Waxay go’aansadeen inay ka saaraan kaalmada lacagta ee waalidiinta carruurta da’doodu u dhexeyso hal ilaa laba sano oo aan isticmaalin ama qayb ahaan isticmaala xanaanooyinka ay dowladdu maalgeliso.
Halkii ay ka heli lahaayeen taageero lacageed, xisbiga Konserfatifka ayaa hadda doonaya inay laga joojiyo lacagta loogu talagalay waalidiinta safka ugu jira xanaanada. Tani waxay cadaatay kadib markii xitaa cod loo qaaday golaha qaran axadii.
Dacwadu waxay dood ka dhex abuurtay ergada ka hor codeynta. Ugu dambeyntiina, in ka badan 184 ergooyin ah ayaa u codeeyay in meesha laga saaro kaalmada caydha, halka tiro yar oo ka mid ah 145 ay u codeeyeen in la sii wado gargaarka lacagta.
Ragga ka mid ah kuwa ku doodaya in lacagta caydha la sii haysto waxaa ka mid ah ra’iisal wasaaraha iyo hoggaamiyaha xisbiga Erna Solberg.
Waxay qirtay guuldarada laakiin isla waqtigaas waxay albaabka u furtay heshiis ay la gaaraan xisbiga Dimuqraadiga Masiixiyiinta.
“Ka saarista lacagta caydha kuma sareyso liiskayaga mudnaanta,” ayay tiri Solberg oo la hadashey NTB.